I-Raw Tadalafil powder (171596-29-5) Abakhiqizi & Abahlinzeki - I-Factory
Igama Product Tadalafil powder
Brand NAme I-Cialis, i-Adcirca
I-Drug Class I-PAH, i-PDE-5 Inhibitors; I-Phosphodiesterase-5 Enzyme Inhibitors
CAS Inombolo 171596-29-5
I-molecular Fi-ormula C22H19N3O4
IMisa ye-Monoisotopic I-389.138 g / mol
Ukuxuba Pi-oint I-298-300 ° C
Fukuvuselela kabusha Pi-oint 2 ℃
I-Half Half-Life 17.5 amahora
Sukufaneleka I-Soluble ku-DMSO (78 mg / ml ku-25 ° C), i-methanol, amanzi (<1 mg / ml ku-25 ° C), i-dichloromethane, ne-ethanol (<1 mg / ml ku-25 ° C)
Sukuhlushwa Tukushisa Gcina ekamelweni lokushisa phakathi kwe-59 ° F no-86 ° F (15 ° C no-30 ° C). Ungalondolozi le mithi ezindaweni ezinomanzi noma ezinamanzi.
Ti-adalafil Aukuphikisana Amaphilisi amancane ama-tadalafil amancane, i-candy yobulili, ikhofi yocansi, njll.
I-Tadalafil, (6R-trans) -6- (1,3-benzodioxol-5-yl) -2,3,6,7,12,12a-hexahydro-2-methyl-pyrazino [1 ＇, 2＇: 1,6] pyrido [3,4-B] I-Cialis), luhlobo lwe-PDE1,4 inhibitor kanye nomuthi olawulwa ngomlomo. Kuyinto ethathwe ku-b-carboline futhi ihlukile ngesakhiwo se-vardenafil (Levitraw) ne-sildenafil (Viagraw), womabili angama-inhibitors we-PDE5 asuselwa esakhiweni somgogodla se-phusimidine. I-Tadalafil powder (i-CAS 5-171596-29) ikhulisa ukuphuma kwegazi ukungena ngaphakathi kwe-corpus cavernosum ngokuphumuza imisipha yemithambo yegazi, futhi lokhu kwenza indoda ikwazi ukuthola ukwakheka. I-Tadalafil powder ivunyelwe yi-United States (US) Food and Drug Administration (FDA) e-5 ukwelashwa kwezidakamizwa (i-ED), futhi yathengiswa emhlabeni wonke ngaphansi kwegama lomkhiqizo iCialis. Iphinde isetshenziselwe ukwelapha i-pulmonary arterial hyperplasia kanye ne-benign Prostatic hyperplasia, isimo lapho indlala ye-Prostate ikhushulwa khona, ibangele izinkinga ngokuchama.
Isici se-pharmacologic sikaTadalafil sika-half-life (amahora angu-17.5) kuqhathaniswa ne-Viagra ne-Levitra (amahora we-4-5). Le ncenye yokuphila ibangele isikhathi eside kakhulu sesenzo futhi, ngokwengxenye, iphethe isiteketiso se-Cialis "yepilisi yempelasonto." Le nxenye engaphezulu kwengxenye yokuphila iphinde isisekelo sokuphenywa kwamanje kokusetshenziswa kwe-tadalafil ku-hypertension ye-pulmary arterial as ukwelashwa kanye kanye nosuku.
Ukwakhiwa kwe-Penile ngesikhathi sokugqugquzela ngokocansi kutholakala ngokuphumula kwemithambo ye-penile ne-corpus cavernosal muscle smooth, okuholela ekwandiseni ukugeleza kwegazi ku-organ. Lokhu kuphumula kuvumela ukugeleza kwegazi okwandayo ngokusebenzisa imishanguzo ye-penile, kanti leli gciwane ligcwalisa amakamelo amabili ngaphakathi kwepenisi okuthiwa i-corpora cavernosa. Njengoba amakamelo agcwalisa igazi, ipeni likhula liqinile. Ukulungiswa kuqeda lapho inkontileka yemisipha kanye negazi eliqoqiwe lingadlulela emithanjeni ye-penile.
Le mpendulo iqondiswa ngokukhishwa kwe-nitric oxide (NO) kumaseli wezinzwa namaseli e-endothelial, evuselela ukwakheka kwe-cGMP kumaseli abushelelezi bemisipha bese ilawula ukufakwa nokuqunjelwa kwemithambo yegazi ethwala igazi kuye nokuphuma ethanjeni. I-cyclic GMP ibangela ukuphumula kwemisipha ebushelelezi futhi ikhuphuke ukungena kwegazi ku-corpus cavernosum, futhi kulinyazwa uhlobo lwe-cGMP oluthile lwe-phosphodiesterase 5 (PDE5) ku-corpus cavernosum etholakala ezungeze ipipi. I-Tadalafil ivimbela i-PDE5 futhi ngaleyo ndlela ithuthukisa ngokwandisa inani le-cGMP elikhona. I-Tadalafil imisa i-PDE5 ukuthi ingabhubhisi i-cGMP bese ikhulisa i-cGMP etholakalayo ukufeza umsebenzi futhi ibangele ukwakhiwa kube isikhathi eside.
Kodwa-ke, njengoba ingxenye yokuphila kweTadalafil isifushane, umphumela wayo uyaphela phakathi nezinsuku ze-2 okwenza i-PDE5 ibuye futhi impilo yakho yobulili - iba yimbi kakhulu. Kungase kudingeke uthathe isikhathi eside ukufeza umphumela oyifunayo, njengezinsuku eziphansi ze-Cialis 4-5 izinsuku zezinsuku ezingu-4-5.
I-blocker yokuthola i-Norepinephrine
I-Mu-opiod receptor agonist
Kunconywe i-Tadalafil powder Isilinganiso
I-Cialis iza amaphilisi aphuzi, aqoshwe ngamafilimu nama-alimondi ku-5, 10 no-20 milligram (mg). Isilinganiso sokuqala sokuphakanyiswa kwe-Cialis powder ukuze kusetshenziswe njengoba kudingeka kulezi ziguli eziningi yi-10 mg, ethathwe ngaphambi kokulindeleka kocansi.
Umthamo wokuqala yi-10 milligrams (mg) okungenani imizuzu engu-30 ngaphambi kocansi. Umthamo ungangena ku-20 mg noma wehla ku-5 mg, ngokusekelwe ekusebenzeni komuntu ngamunye nokubekezela. Kodwa, ukuphakama okungu-20 mg njengesilinganiso esisodwa. Ukuphakama okuphakanyisiwe okuphakanyisiwe kunesidingo ngosuku ngalunye ezigulini eziningi. akufanele kuthathe okungenani isilinganiso esisodwa kumahora we-24. Iziguli ezilindele ukuthi zisebenze ngokocansi okungenani kabili ngesonto zingathatha umthamo wansuku zonke we-5 mg, futhi lokhu kungancishiswa ku-2.5 mg kanye nsuku zonke, kuye ngokuphendula komuntu ngamunye.
I-Cialis powder yokusebenzisa njengoba kudingeka iboniswe ukuthuthukisa umsebenzi ngokuqhathaniswa ne-placebo kuze kube ngamahora we-36 kulandela i-dosing. Ngakho-ke, lapho ululeka iziguli ngokusetshenziswa kahle kwe-Cialis powder, lokhu kufanele kubhekwe.
Kuyaqapheleka ukuthi ukwakheka ngeke kwenzeke ngokuthatha iphilisi. Futhi ungathathi i-Cialis uma ungasebenzi kahle uma uthatha i-Adcirca ye-pulmonary arterial hypertension. Ngaphandle, iTadalafil yokungasebenzi kahle isetshenziswa kuphela ngabantu abadala abaneminyaka engu-18 nangaphezulu.
♦ I-Tadalafil powder ingasiza ukuphumula imisipha ku-prostate yakho nesinye. Lokhu kungasiza ukuthuthukisa izimpawu zakho ze-BPH.
♦ Ukwenza ngcono izimpawu ze-ED, i-tadalafil powder iyasiza ukwandisa ukugeleza kwegazi ukuya epeni. Lokhu kungakusiza ukuthi uthole futhi ugcine ukulungiswa. Ukuze uthole i-tadalafil powder ukukusiza ukuba ulungiswe, udinga ukuvuswa ngokocansi.
♦ Ku-PAH, i-tadalafil powder isebenza ukuthuthukisa ikhono lakho lokuzivocavoca ngokuziphumuza imithwalo yegazi emaphashini akho. Lokhu kwandisa ukugeleza kwegazi.
Kanye nemiphumela yayo edingekayo, umuthi ungabangela ezinye izinto ezingafuneki. Nakuba kungeke kwenzeke zonke lezi zemihelo, uma kwenzeka kungenzeka badinga ukunakekelwa kwezokwelapha. Sicela uhlole imiphumela emibi elandelayo ye-tadalafil powder:
Imiphumela emibi evamile
Imiphumela emibi kakhulu kodwa embi kakhulu
Ukwakhiwa okwesikhashana okungaholela ekulimazeni ipeni, izinkinga zombono, nokulahleka kokuzwa.
Uma lemiphumela iba mncane, ingahamba phakathi kwezinsuku ezimbalwa noma amasonto ambalwa. Uma behlukumezekile kakhulu noma bengayi kude, khuluma nodokotela wakho noma umuthi wemithi.
Abantu abanezimo ezilandelayo akufanele bathathe i-Cialis powder ngaphandle uma udokotela evuma:
▲Izinkinga zenhliziyo, i-angina, nanoma yiluphi uhlobo lwesifo senhliziyo
▲Umfutho wegazi ophakeme noma ophansi
▲Ukuhluleka kwenhliziyo ukuhlushwa noma ukushaywa phakathi kwezinyanga zokugcina ze-6, noma ukuhlukunyezwa kwe-myocardial phakathi nezinyanga zokugcina ze-3
▲I-sickle cell anemia, i-myeloma eminingi, i-hemophilia, i-leukemia, noma enye i-disorder blood
▲Isifo noma isifo sezinso
▲Ukukhubazeka kwesakhiwo se-penis, njengesifo se-Peyronie
▲Noma yisiphi isimo sempilo eseluleka ngaso ukuba angabi nobulili
Uma usebenzisa i-tadalafil, kungase kube nezinye izidakamizwa ezingathinta izidakamizwa, ezingabangela imiphumela emibi. Ukusebenzisana kwezidakamizwa kungashintsha ukuthi imithi yakho isebenza kanjani noma ukwandisa ingozi yemiphumela emibi kakhulu.
I-Talalafil inomphumela omuhle wokusebenzisana ekunciphiseni kwe-nitrate ekunciphiseni kwegazi. I-talalafil ingabangela ukwehla okukhulu kwegazi lakho uma kusetshenziselwa i-nitrate, okungaholela ekutheni isisu, ukuphelelwa amandla, nokungahle kwenzeke ukuhlasela kwenhliziyo noma isifo sohlangothi. Ungasebenzisi i-tadalafil nganoma yikuphi okulandelayo: izidakamizwa ezithile ezisetshenziselwa ukuphatha ubuhlungu besifuba / i-angina (i-nitrate njenge-nitroglycerin, i-isosorbide), izidakamizwa zokuzilibazisa ezibizwa ngokuthi "ama-poppers" aqukethe i-amyl noma i-nitrite ye-butyl.
Uma uthatha imithi ye-alpha blocker (njenge doxazosin, i-tamsulosin) yokwelapha i-prostate eyandisiwe / i-BPH noma i-high blood pressure, ingcindezi yakho yegazi ingase ibe phansi kakhulu okungase iholele ekuziphatheni komzimba noma ukuphelelwa amandla. Udokotela wakho angase aqale ukwelashwa nge-dose ephansi ye-tadalafil noma ulungise imithi yakho ye-alpha blocker ukuze unciphise ingozi yokucindezela kwegazi ephansi.
Ezifundweni zemitholampilo, amanani abalulekile okuphendula abikwa afinyelela ku-36 h kulandela ukumuncwa kwezidakamizwa. I-Tadalafil yenziwe kakhulu kusibindi esikhaleni yi-CYP3A4 ezintweni ezingasebenzi ngokumelene ne-PDE5 futhi yekwa ikakhulu njengama-metabolites emgodini nomchamo. I-pharmacokinetics ye-tadalafil ayithinteki yizici ezinjengokudla ukudla notshwala, ubudala, ukuba khona kwesifo sikashukela, kanye nokuntula okungatheni kwe-hepatic noma ngokulinganisela. Imicimbi ejwayelekile ehlobene nokusebenzisa izidakamizwa yikhanda, ubuhlungu emuva, i-dyspepsia, ne-myalgia. Kwi-10 ne-20 mg imithamo, i-Tadalafil ayinawo umthelela omkhulu ekucindezelweni kwegazi kanye nokushaya kwenhliziyo futhi ayiholeli ekwandeni kwezifo ze-myocardial infarction. Imibiko engafani yokuqalwa kwesikhathi eside kakhulu kune-4 h nokuqagela kuye kwaphawulwa ngokusetshenziswa kwe-tadalafil. I-Priapism, uma ingaphathwa kahle, ingahle ibangele ukulimala okungaphendukeki kwezicubu. Iziguli ezinomugqa ohlala mkhulu kune-4 h ziyelulekwa ukuba zifune usizo oluphuthumayo lwezokwelapha. Ezigulini ezinesifo sikashukela, ukuthuthukiswa kokusebenza kwe-tadalafil akunandaba uhlobo lwesifo sikashukela kanye nohlobo lokwelashwa kwesifo sikashukela.
Eminye imithi ingathinta ukususwa kwe-tadalafil emzimbeni wakho, okungase kuthinte indlela i-tadalafil esebenza ngayo. Izibonelo zifaka i-azole antifungals (njenge-itraconazole, i-ketoconazole), ama-antibiotic ama-macrolide (njenge-clarithromycin, i-erythromycin), i-HIV protease inhibitors (njenge-fosamprenavir, i-ritonavir), i-virus ye-hepatitis C inhibitors (i-boceprevir, telaprevir), i-rifampin, phakathi kwabanye .
Ungathathi lo muthi nanoma yimuphi omunye umkhiqizo oqukethe i-tadalafil noma eminye imishanguzo efanayo esetshenziselwa ukwelapha ukungasebenzi kahle kwe-hyp noma i-pulmonary hypertension (njenge-sildenafil, vardenafil).
Ngokuphathelene nokusebenzisana kwe-tadalafil nezinye izidakamizwa kusenokuningi, uma ufuna ukusebenzisa izidakamizwa nge-tadalafil powder (CAS 171596-29-5), khumbula ukubonana nodokotela wakho futhi uzokunika iseluleko esisebenzayo nesokwethenjelwa.
I-talalafil powder, i-sildenafil powder, ne-vardenafil powder konke benza ngokuvimbela i-PDE5 enzyme, kodwa lezi zidakamizwa nazo zivimbela ama-PDE enzymes 6, 1, ne-11 ngezinga elihlukahlukene. Ngokwesibonelo, uSildenafil ne-vardenafil bavimbela i-PDE6, i-enzyme etholakala iso, ngaphezu kwe-tadalafil. Abanye abasebenzisi be-sildenafil babona i-tinge bluish futhi banomzwelo wokukhanya ngenxa ye-PDE6 inhibition. Ngaphandle kwalokho, uSildenafil ne-vardenafil nabo bavimbela i-PDE1 ngaphezu kwe-tadalafil. I-PDE1 itholakala ebuchosheni, enhliziyweni, nasezintweni ezinesisindo esiphambanisayo. Kucatshangwa ukuthi ukuvinjelwa kwe-PDE1 ngu-sildenafil ne-vardenafil kuholela ekwenzeni i-vasodilation, i-flushing, ne-tachycardia.
Uma kuqhathaniswa nokusebenza ku-PDE6 ne-PDE1, i-tadalafil yenza okuvelele ku-PDE11. I-PDE11 iboniswa emisipha yamathambo, i-prostate, isibindi, izinso, i-pituitary gland kanye nama-testes. Noma kunjalo, imiphumela emzimbeni wokuvimbela i-PDE11 aziwa.